Maamulka Degmada Qardho oo sheegay in aan magaalada hub lagu dhex qaadan karin • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Maamulka Degmada Qardho oo sheegay in aan magaalada hub lagu dhex qaadan karin
Maamulka Degmada Qardho oo sheegay in aan magaalada hub lagu dhex qaadan karin
April 7, 2012 - By: Moha Salat
Maamulka degmada Qardho oo Saxaafadda shir u qabtay ayaa ka hadlay arimo badan oo ku aadan nabadgelyada,fayo dhowrka iyo in magaalada hub lala dhex maro.
Ku-xigeenka Duqa degmada Qardho Cabdirisaaq Cali Cartan (Cabaade) ayaa sheegay in maamulka degmadu uu dadaal ugu jiro sidii nadaafadda magaalada Qardho kor loogu qaadi lahaa iyadoo ay dhamaan laamaha xaafadaha magaalada Qardho ay ka socdaan ololeyaal nadaafadeed.
Mr Cartan ayaa dhinaca kale soo hadal qaaday meheradaha ku yaal wadada laamiga ah hareeraheeda isagoo tilmaamay in kuwo badan oo kamid ahi ay qayb weyn ka qaataan nadaafad darada iyo burburka ku yimaada wadada laamiga ah.
“Qoryaha magaalada lagu dhex wato waa sharci darro umana dulqaadan doono, arintaas sharci adag baan kasoo saaraynaa, qayb weyn ayeyna ka qaadataa falalka ammaan darida ah ee magaalada ka dhaca” ayuu yiri mar uu ka hadlayey hubka sharci darada ah ee magaalada lagu dhex qaato.
Xoghayaha guud ee maamulka dowladda hoose ee degmada Qardho Maxamuud Maxamed Shire ayaa isna ugu baaqay bulshada inay kala shaqeeyaan kor u qaadista nadaafadda si looga hortago in cuduro ay dilaacaan bilicda magaaladuna ay noqoto mid aad u sareysa.
Ma ahan markii ugu horeysey ee ay maamulka degmada Qardho ee gobolka Karkaar ka hadlaan hubka sharci darada ah ee magaalada lagu dhex wato iyadoo horayna taliska ciidamada Boolisku ay arintaas u mamnuuceen.
Cabdiraxmaan Maxamed Cali